Isiokwu:Mụta Olee otú a Video Pụrụ Inyere Gị si dị Gị Industry
Site: Fisayo November 19, 2017
Video bụ ihe niile banyere ihu na okwu ihu na ihu. Ọ dịghị ihe pụrụ tụnyere onye nkwurịta okwu ebe ihu na ihu na kọntaktị bụ omume. Ma, ya na upsurge na online azụmahịa na zuru ụwa ọnụ interactions, onye nkwurịta okwu na-adịghị otú o kwere omume ma e wezụga na enyemaka nke ezubere iche videos. Business videos nwere chịrị si mkpa maka ihu na ihu na nkwukọrịta na ọtụtụ ndị ufodu, ma gị mkpa nri video ngwaọrụ iji nweta ukwuu pụta.
Ọ bụrụ na ị na-na ahịa - n'agbanyeghị nke ụlọ ọrụ - gị mkpa mgbe nile nkwurịta okwu na-arụ ọrụ na nwere ahịa na-ihe-aga nri. Email kemgbe kasị dị irè na a pụrụ ịdabere na nke a, ma na-agbasa ọhụrụ n'ókèala na dijitalụ ahịa ka necessitated mkpa maka yana idobe okirikiri videos. Nke a na-aga na-egosi na mgbe email ahịa dị oké mkpa, ọ ghaghị ijikọta ya na explainer vidoes maka ezubere iche pụta.
Uru Iji Videos maka Your Business Needs
Ị na-azụ ahịa guzo ma na-nweta ezubere iche ebumnobi. Ogologo oge ị na-leveraging ike nke internet technology n'ahịa gị ngwọta - gị mkpa videos. Videos bụ gị dijitalụ nnọchiteanya na ego maka iru ma na-enyere gị ahịa. Ma iji nweta ya site na mmalite, ị ga-emerịrị ya ịmụta otú a video nwere ike inyere gị si dị gị ụlọ ọrụ n'ihi na mma-arụpụta.
Ebe a bụ ụfọdụ n'ime uru n'ihi na ahịa videos ị ga-atụle ihe taa -
na-ege ntị aka
Ndị mmadụ hụrụ ya, ndị nụkwara ya niile ụbọchị ndị a - ma ọ bụghị na àgwà video ọdịnaya. People agaghịkwa nwere oge gụọ ogologo odide na nsogbu ha anya na i meziri. People mfe ina nri ye email ahịa ụbọchị ndị a n'ihi na ha na ogologo-asọfe n'akwụkwọ ozi - ma videos bụ ihe dị iche iche. People jikọọ ntabi na videos n'ihi na nke audio-visual / multimedia mkpesa. Ọ bụrụ na ị ga-emeri na-ege ntị aka na gị dijitalụ ahịa mgbalị, mgbe ị ga-eche na videos.
Win, Emega na tọghata edu
Ebute akakabarede bụ nnọọ mfe mgbe lekwasịrị kiriri na-enwe ike jikọọ na-arụ na a ika. Ị ga-enwe ike iji merie uche nke nwere ahịa, itinye ha ntinye na tọghata ha n'ime-eguzosi ike n'ihe ahịa ma ọ bụrụ na i nwere ike leverage nke videos. Marketing videos-eme ka ị dị irè na ejikọta, ekwurịta okwu na n'ịtụgharị edu na ala - n'agbanyeghị oge na anya. Nwere ahịa ga-ntabi-jikọọ na gị mgbe ha na-ahụ ihu n'azụ brand na-ekwu okwu na ha. Videos-enye gị azụmahịa a ihu na a olu na ndị mmadụ nwere ike ikwu na, enyere gị aka tọghata enweghị hassles.
Dịkwuo Brand Awareness na Ekekọrịta gbara ọkpụrụkpụ Stories
Videos emere ebere na inokota ọdịnaya gị ahịa mgbalị site na-amụba tụrụ pụta. Ọ na-enyere gị onwe dịkwuo ika mmata site n'ịgwa ndị ozi gị ozugbo. Marketing videos ekwe gị ịkọrọ gbara ọkpụrụkpụ akụkọ na ịbara na-ege gị ntị na ozugbo call-to-edinam. The ọzọ gị iche na-ege ntị na-aghọta akụkọ n'azụ azụmahịa gị na otú ọ metụtara ha, ndị ọzọ ha na-amanye ịzụta si ị ma ọ bụ na-ekere òkè gị na a na-akwụghachi ụgwọ n'ụzọ.
Video integrates na niile Digital Marketing Channels
Otu n'ime abamuru nke video bụ na ọ pụrụ iwekota na niile ahịa ọwa ruo gị kiriri. Na video ahịa, i nwere ike iru gị iche kiriri na-elekọta mmadụ media, mobile ngwaọrụ, mmekọrịta weebụsaịtị, ozi ịntanetị na ọbụna na digital bọọdụ mkpọsa. Eziokwu bụ na ị nweta ihe gị oziịchụnta ahịa na explainer videos n'agbanyeghị ihe-ege gị ntị na-eme ma ọ bụ na ebe ha na-.
Videos n'usoro Higher na Search Engines
Gịnị mere i ji na-eche YouTube videos bụ na-ewu ewu na-aga nke ọma? Ihe kpatara ya dị mfe: ndị mmadụ n'anya na-ekiri videos n'ihi na ha bụ mmekọrịta na ozugbo ekere òkè. Ka eziokwu a gosi gị video ahịa mgbalị. Ma ọ bụghị ihe niile. Videos ọkwá elu ke search engines n'ihi na ndị mmadụ na-eji oge gị website mgbe ha na-ekiri vidio. Videos enyere ndị mmadụ na-anọ na-arụ ogologo na gị website, na-eme ka search engines ọkwá gị na saịtị elu n'ihi na nke onye ọrụ aka. Chee echiche banyere ya: ị agbasaghị pịa ọzọ na isiokwu / utu aha na video ọdịnaya karịa ndị ọzọ n'ihi na ọ bụ nnọọ eke na-eme otú.
Na mkpokọta, ị ga-emerịrị ya ịmụta otú a video nwere ike inyere gị si dị gị ụlọ ọrụ ịga nke ọma na video ahịa. na nke a, ị ga-abụ nnọọ ike iru ika ntụkwasị obi, tọghata edu, na ọbụna nweta quality referrals na mfe videos.
-Akpa na-ekwu okwu on "Mụta Olee otú a Video Pụrụ Inyere Gị si dị Gị Industry"